Ascott Zuva Boka: Kubatana kutsva - uye zvazvinoreva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dhinda Zviziviso » Ascott Zuva Boka: Kubatana kutsva - uye zvazvinoreva
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Dhinda Zviziviso • Vietnam Kuputsa Nhau
Iwe wakataurwa here mune ino yekuburitsa, kana une zvimwe zvakawanda zvekuwedzera?
Ascott inotarisira zvikamu mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu pamatanho matatu akasarudzika ekugara mukati meSun Group's Tay Ho View Complex muHanoi. Iyo iconic inosanganisirwa budiriro ichave inzvimbo nyowani yeVietnam, ichichinja nzvimbo yepamusoro yeguta uye kumutsidzira yeguta rakasarudzika rekumberi kwemvura Tay Ho dunhu. Ascott ichaunza yayoCrest Unganidzo mhando muVietnam. Parizvino inongowanikwa muFrance, ino inguva yekutanga Iyo Crest Kuunganidzwa ichatanga muAsia, ichipa vaenzi chiitiko chakasarudzika choumbozha kuburikidza nemusanganiswa wakasarudzika wehunhu nenhaka. Ascott ichaunzawo siginecha yayo Ascott Iyo Residence brand pamwe neayo inokurumidza kukurumidza mhando, Citadines Aparthotel. Ascott Iyo Residence inopa vashanyi vanonzwisisa zvakasarudzika uye zvakasarudzika zviitiko nepo maCitadines Aparthotel achipa mukana wekuchinja uye kuita kweimba inoshandirwa ine masevhisi ehotera pamwe nezviitiko zvemuno zvakakanganiswa. Idzo dzimba dzekugara nhatu dzinotarisirwa kuvhurwa muzvikamu kubva 1,905Q 1.
Pamhemberero yekusaina yakaitika pakati peAscott neSun Group, VaKevin Goh, Chief Executive Officer weCLI weLodging vakati: "Kuumba kubatana kwakabatana nevatambi vemaindasitiri anotungamira kuri kuramba kuri zano rekukudza Ascott. Inotipa mukana wekumhanyisa wepombi yemapurojekiti emhando yepamusoro kukura hupfumi hwedu hwepasirese uye mari yedu yemitero inodzokororwa pavanenge vachivhura uye kugadzikana. Izvi zvinoenderana neCLI's asset-mwenje zano. Kubatana kweAscott kwakabatana neSun Group kugadzirisa hukuru hukuru hwekugara muVietnam nematatu emhando dzedu, zvinoratidza kuvimba kwavo muunyanzvi hwepasi rose hwaAscott uye mukurumbira wechiratidzo. Iyo purojekiti ichave inoratidzira mureza weascott yekugamuchira vaeni kugona. Pamwe chete, tinotarisira kuunza nyowani yekuvaka muVietnam, kukwezva vashanyi vemuno nevekunze kuti vawane imba yavo kure nemusha nesu. Kubatana kwedu kwakarongeka kuchagadzirawo nzira yekuti Ascott vabatsirane pazvirongwa zvekugara neSun Group mune ramangwana. ”
Ms Nguyen Vu Quynh Anh, CEO, Sun Hospitality Group (SHG), chiratidzo chevaeni cheSun Group, vakati: “Sun Group neSHG vanofara kubatana neAscott, imwe yemakambani anotungamira epasi rese, kuzadzisa chiono chedu cheTay Ho View Complex. Saiye piyona muAsia Pacific's inoshandirwa yekugara indasitiri, Ascott's mukurumbira wepasi rese uye network ndeyakakodzera kwazvo yedu yepasirose-kirasi chirongwa. Iine ruzivo rweSun Group uye ruzivo rweSHG mune mazhinji eprojekti epasi rose eVietnam senge InterContinental Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Hotel de la Coupole - MGallery (Sa Pa), nezvimwewo Ascott's mubairo-unogamuchira vaenzi ruzivo , isu tine chivimbo chekuti Tay Ho View Complex ichave iri yekupedzisira mamaki epasirese emunyika kutora pfungwa dzese. Tay Ho View Complex yakagadzirirwa kutsanangura tsika dzekugamuchira vaeni muguta. Uyezve, chirongwa ichi chichawedzera kukura kuri kuwedzera kwehupfumi hweHanoi, kukwevera mabhizinesi nevanozorora kuenda kuguta uku vachipawo mikana inowanika kumabasa kunharaunda. ”
Kugara naAscott kuTay Ho View Complex, Hanoi nyowani yekuvaka icon
Tay Ho View Complex iri mune rimwe rematunhu akasarudzika eHanoi uye iri padyo neWest Lake inozivikanwa. Pamusoro peatatu Ascott yedzimba dzekugara, kusimudzira kwakasanganiswa kunosanganisirawo zvekutengesa nekutengesa zvinhu. Tay Ho View Complex ichave yakakomberedzwa nemamishinari mazhinji, mabhizinesi, maresitorendi uye sarudzo dzekutengesa. Ichave zvakare padhuze neinouya Opera House ichavhurwa mune ramangwana. Matunhu epakati pebhizinesi reHanoi muHoan Kiem, My Dinh uye Ba Dinh, pamwe neNoi Bai International Airport vese vari mukati memaminitsi makumi maviri ekutyaira.
Ascott Iyo Residence ichapa 1,167 mayuniti anosanganisira masutu, studio, imwe- kusvika ina-yekurara dzimba uye duplex mayuniti, nepo Citadines Apart'hotel ichapa zvikamu 710 zvine studio, imwe- kusvika ina-yekurara dzimba uye duplex zvikamu. Iyo Crest Kuunganidzwa ichapa makumi maviri nemasere mayuniti, anosanganisira matatu- uye mana-yekurara dzimba duplex. Zvivakwa pazvivakwa zvitatu izvi zvinosanganisira dzimba dzevagari, imba yekuverengera, uye dzimba dzekurovedza muviri. Vagari vanozowanawo maresitorendi ekumusoro-soro neMichelin-nyeredzi kana mashefesi ane mukurumbira pasi rese anounza vashanyi pazororo rekugadzirira. Pachavewo nekirabhu pamwe nedenga bhara rakagara pamusoro peyakagadziriswa budiriro yevaenzi kuti vazorore mushure mezuva rakareba nezvisviniro zvebhawa.
Kuvapo kwaAscott muVietnam
Ascott akagadzira mukana wake wekutanga kuenda kuVietnam makore 27 apfuura nekuvhurwa kweSomerset West Lake Hanoi. Nhasi, Ascott ndiye muridzi wepasi rose muridzi-muridzi munyika. Nekuwedzera kwenzvimbo nhatu dzekugara, Ascott's portfolio muVietnam ine zvikamu zvinosvika 9,200 zvekugara munzvimbo dzinopfuura makumi matatu mumaguta gumi nemaviri akadai seBinh Duong, Cam Ranh, Danang, Hai Phong, Halong, Hanoi, Ho Chi Minh Guta, Hoi An, Lao Cai, Nha Trang, Sa Pa uye Vung Tau. Muna Chikumi 2021, Ascott's private fund, Ascott Serviced Residence Global Fund, yakawana iyo 364-unit Somerset Metropolitan West Hanoi iyo inotarisirwa kuvhurwa muna 2024.